You need to thank that they were not doing strip search nor body pat down | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Castrated Myanmar Government dare not arrest the masterminds of Mass murderers
Resign U Thein Sein, the President’s post is not for the faint-hearted »
You need to thank that they were not doing strip search nor body pat down
You need to thank that they were not doing strip search nor body pat down…ha ha ha.
And the ladies are lucky…the soldiers are not doing Body-cavity searches as in lockups and prisons…(Intimate searches of the human body’s natural orifices. Searches involving the examination of body cavities are intrusive explorations of the vagina or the anus.
Patrick Tan shared The Irrawaddy (Burmese Version)‘s photo.
ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ တုတ်ဓားကိုင် ရမ်းကားနေသူတွေကို ရှာဖွေ စစ်ဆေးရေးမလုပ်ဘူး။
ဈေးဝယ်ပြန် အမျိုးသမီးတွေ ဆွဲချင်းထဲ သနပ် (သရက်သီးသနပ်) ဝှက်သယ်လာမှာကြောက်တော့ ရှာရသဗျ။
ဟေ့ ဘပြောင်တို့တိုင်းပြေမှာ လက်နက်ကိုင်ချင်ရင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကိုင်ဟေ့နော်၊
ဘယ်သူမှအရေးမယူဘူး။ ခိုးကြောင့်ခိုးဝှက်ဆိုရင်တော့ နာပြီသာမှတ်။
ရပ်ရွာလုံခြုံရေး တပ်မတော်လည်း တာဝန်ယူပေး (ဓာတ်ပုံ- စတိဗ်တစ်ကနာ)
Tags: Asia, Burma, Ha-ha, Irrawaddy, Myanmar, Rakhine State, Strip search
This entry was posted on May 30, 2013 at 12:39 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “You need to thank that they were not doing strip search nor body pat down”
May 30, 2013 at 2:06 pm | Reply
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတာ ဒါကိုခေါ်တာလား။
Sanay Ninetwofive · 255 followers
အဓိကရုဏ်း ကိုင်တယ်ဖြေရှင်းပုံကို သိချင်၊ လေ့လာချင်လို့ ကင်မရာလေးဌားပြီး၊ လားရှိုးမြိုကို ထွက်လာခဲ့တယ် (ကိုယ်စရိတ်ကိုယ်စား) ပေါ့ဗျာ ၊ တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေ က အားရစရာ တစက်ကလေးမှ မရှိဘူး………။ လက်ထဲမှာ သေနတ်တွေကိုင်ထားတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ရဲက လမ်းပေါ် ဓါးတရမ်းရမ်း တုတ်တရမ်းရမ်း ဆိုင်ကယ်တဝီဝီသွားလာနေတဲ့ လူရမ်းကား ၅၀ယောက် တအုပ်၊
၂၀ ယောက်လောက်တစ်အုပ် အုပ်စုလိုက် အုပ်စုလိုက် ရမ်းကားနေတဲ့ အကြမ်းဖက် လူရမ်းကားလို့ပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်တော့မယ် ဒီကောင်တွေက အမျိုးဘာသာကို ကာကွယ်တာမှမဟုတ်တာ လမ်းပေါ်ထွက် ရမ်းကားနေတာပဲ လူရမ်းကားပေါ့ဗျာ …။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုပဲမြင်တယ် ..၊ အဲ့ဒီလိုကောင်တွေကို ဘာလို့ မတားဆီး ၊ မဟန့်တားတာလဲ လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ သေနတ်တွေမှ အားမနာဗှာ ဘာလဲ ကျည်ဆံမရှိလို့လား မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..။